My Students - www.mixingwithleomicro.com
Ｄｅａｒ Ｓｔｕｄｙ Ｇｒｏｕｐ
၂၀၁၁ လောက်က audio သင်တန်းတစ်ခု တက်ခဲ့ဖူးပါတယ်..
Neundo4 နဲ့သင်ခဲ့ရတယ်..လက်တွေ့ ကျကျမသင်ခဲ့ရတော့ ကို်တိုင်လေ့ လာတာမျိုးပဲ လပ်လာုခဲ့တာ...
ဒီ frequecy သင်တန်းလေး မှာ သင်ခွင့်ရတော့ ကိုယ်မသိတာတွေ အများကြီး သိခဲ့ရတယ်..လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မူ့တွေ လုပ်ရတော့ တကယ်သိသိသာသာ တိုးတက်ပါတယ်...၃လ အတွင်းမှာ ကိုယ်က လည်းသင်တန်းမကြာခန ပျက်ပေမဲ့ မရမချင်းသင်ပေးတဲ့ ဆရာကောင်းတယောက် ရှိနေတော့ Audio engineering နဲ့ပါတ်သတ်ရင် ဘာ မှစိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူး...တကယ်ဝါသနာပါတဲ့သူတွေ အသေးစိတေ်လ့လာချင်တဲ့သူတွေ တကယ် တက်ရောက်သင့်ပါတယ်....အမြဲလေ့လာ နေရမဲ့ပညာရပ်ဖြစ်တာကြောင့်
သင်တန်းပြိးသွားရင် တောင် Group ကနေ update နည်းပညာတွေ အမြဲတမ်းဝေမျှပေးနေတဲ့ သင်တန်းဆရာလည်းဖြစ်ပါတယ်...အလုပ်တွေ အတူတွဲလုပ်နေတဲ့ညီအကိုလည်းဖြစ်တာကြောင့် soft ware plugin တွေလည်းအမြဲ ဝေမျှပေးနေလို့ ကျေးဇူးအထူးပါ.....
Note.... သင်တန်း ချိန်တွင် အနွေးထည် သို့ စောင်ယူလာရန်😁😁😁
ကိုမောရှည်က တော့ ကျွန်တော်နဲ့ တခြားသော အနုပညာရှင်တို့ နဲ့ အလုပ်တွဲလုပ်နေတဲ့ pianist တစ်ယောက်ပါ
Etk Tsm ( Saw That Zin Moe)
အရမ်းကောင်းပါတယ်။သေချာ လေး သင်ပေးပါတယ် ။
မသိတာ မရှင်းတာ ရှိလည်း သိအောင် ရှင်းအောင် ထပ်ထပ် သင်ပြပေးပါတယ်။
သင်ရိုးအပြင် ပြင်ပက ဗဟုသုတ နည်းပညာတွေလည်း အများကြီး ရလိုက်ပါတယ်။ အရမ်းကောင်းတဲ့ သင်တန်းပါ
သူကတော့ သာဒီလူးတို့ The Key Band က Drummer စောသန့်ဇင်မိုးပါ
Frequency Studio မှာသင်ကြားလိုက်ပါ
Pro Tools sofeware အသုံးပြုကာ Audio Edit
ပြုလုပ်နည်း Recording ဖမ်းနည်း Ez drummer
Addictive drum တိူ့ကိုအသုံးပြုကာ Drum
Program ရေးနည်း Mixing ဆွဲနည်း Mastering
အသုံးပြုနည်း စသည်တို့ကို သင်ကြားပေးပါသည်
သင်တန်းပီးသွားတော့ အရင်က Audio အကြောင်း
နားမလည်ခဲ့တာ မှန်သမျှ အခု Audio ပညာရပ်
များစွာ ရရှိပြီး ပြောင်းလဲတိုးတက်လာပါတယ်
ဒီသင်တန်းကို ဂီတအကြောင်း Audio အကြောင်း
ဆရာကလည်း စိတ်အရမ်းရှည်ပီ နားမလည်တာမှန်သမျှ အသေးစိတ် သေသေချာချာ ရှင်းပြပေးခြင်း
ညီအကိုလို သဘောထားပြီး စေတနာအပြည့်နဲ့
သင်ကြားပေးသောကြောင့် Audio အကြောင်း
သူကလဲ MEBC လိုကျောင်းမျိုးမှာ သီအိုရီ သင်ပေးနေတဲ့ဆရာတစ် ဦးဖြစ်သလို Bass ကိုပိုင်နိုင်စွာ တီးခတ်နိုင်တဲ့ Player တစ်ယောက်ဆိုလဲ မမှားပါဘူး
အရမ်းကိုသဘောကောင်းပြီး စေသနာအပြည့်ဝနဲ့သင်ကြားပေးတဲ့သင်တန်းတခုလို့ပြောချင်ပါတယ် တကယ်ဘဲ သင်ကြားမှုပိုင်းရော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာရောအရမ်းကိုကောင်းပါတယ် ဒီသင်တန်းကနေအများကြီးသင်ယူလိုက်ရပါတယ် အများကြီးလဲသိရှိနားလည်ခဲ့ရပါတယ် တကယ့်ကိုအရမ်းကောင်းတဲ့ သင်တန်းတခုပါလို့ပြောချင်ပါတယ် thanks ဒီထက်မကအောင်မြင်ပါစေဆရာ
သူကတော့ ကရင်ပြည်နယ် မှ တေးရေး တစ်ယောက်ပါ
Mg Thar Ko
ဆရာက audioနဲ့ပက်သက်ပြီး နားမလည်တာမှန်သမျှ စိတ်ရှည်ရှည် အထပ်ထပ်သင်ကြားပေးပါတယ် တကယ်စေတနာထားသင်ကြားပေးတာပါ မသိတာတွေ အများကြီးသိခဲ့ရတယ် thz
requency studio မှာ audio ပိုင်းလေ့လာတာခုဆိုသင်တန်းကာလပြီးပါပြီ စိတ်ခြေစွာသင်ပေးလို့ ဆရာ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ ကျွန်တော်နဲ့ဝါသနာတူသူငယ်ချင်းများကိုလဲ frequency မှာလေ့လာရတာ အဆင်ပြေကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ် သင်တန်းကြေးလဲမများပဲ သေချာရှင်းပြတယ် အဲ့တာမှနားမလည်သေးဘူးဆို နောက်အတန်းချိန်တွေမှာပါ ထပ်လေ့လာလို့ရသေးတယ် ခွင့်ပြုပေးထားတော့ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့ဗျာ audio ပညာကခက်ခဲပါတယ် သင်တန်းဆင်းတာနဲ့တန်းပြီး pro တယောက်မဖြစ်နိူင်ပေမဲ့ pro တယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးအထောက်အပံတခုဖြစ်မှာတော့သေချာပါတယ်ဗျ စိတ်ခြေလက်ခြေပြောပြပေးလို့ကျေးဇူးပါဆရာရေ
Seng Thu Hkaung
လုံးဝလုံးဝကို မျော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းပါဘဲ အဲလောက်ထိသိမယ်ဗဟုသုသရမယ်မထင်ထားဘူး အရမ်းကိုပညာရပါတယ်။ဖြစ်နိုင်ရင် vedio record ဖမ်းထား ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေက ပညာယူစရာတွေဘဲ မမှတ်မိမှာ စိုးလို့ thank frequency studio .
အရမ်‌းကျေးဇူးတင်‌တယ်‌ဆရာ စိတ်‌ရှည်‌ည်‌နဲ့‌ကောင်‌း‌ကောင်‌း‌လေးရှင်‌းပြ‌ပေးတယ်‌ သင်‌ကြားမှုပုံစံလဲ‌ကောင်‌းတယ်‌ဆရာ
Langh En Khup
Audio အပိုင်း နားလည်းဖို့ကတော့ တအာကြီးခက်ခဲမယ်လို့ထင်ခဲ့တာ frequency studio က သင်းပေတာဆိုရင် အသေးစိတ်သင်းကြားပေတာ အင်မတန် Audio engineering တစ်ယောက် ဖြစ်ချင်းရင် တတ်တင့်တဲ့သင်းတန်း စြ်တယ်
သင်တန်းပြီးသွားတော့လည်း ကျွန်တော်ထင် သလောက်ထက်မက တိုးတက်လာတယ်
Myo That Tin
Frequency studio က audio enginnering သင်တန်း audio engineering တစ်ယောက်သိသင့်တယ့် အခြေခံကနေစပြီး advanced ထိ ကိုယ့်ဘာသာ လေ့လာနိုင်အောင်အထိသင်ပေးပါတယ်..သင်တနိးပြီးသွားတယ့်အခါမှာ အရင်ထက်ပိုသိလာပါတယ်.. ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်တုန်းက စမ်းတဝါးဝါးဖြစ်နေတယ့် အပိုင်းတွေကို စာတွေ့ပြောပြပြီး လက်တွေ့လုပ်ခိုင်းလို့ အများကြီးပိုသိလာပါတယ်.(သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖမ်းတယ့်အခါ Mic techniques တွေ သီချင်းရဲ့Body,Elementဆိုတာ ဘာလဲ..EQ,Compressor,Reverbတွေ ပိုသိလာပါတယ်..audio enginnering ကိုတကယ်စိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်သီချင်းကိုယ် ဘယ်လို ဖန်တီးရင်ကောင်းမလည်းဖြစ်ဖြစ်နည်းပညာပိုင်းအရ ချည်းကပ်သင့်တယ် လို့ ဒီသင်တန်း တက်ပြီးရင်သိလာပါလိမ့်မယ်.. အနုပညာ အရည်အသွေးဘယ်လောက်မြင့်မြင့် ဒီဖက်ခေတ်မှာ နည်းပညာ ကို ထားခဲ့လို့မရပါဘူး..သင်တန်း ကာလ တစ်ခု ဆီမှာ လည်း ၆ယောက်ထက်ပို လက်မခံလို့ အနီးကပ်သင်ယူလို့ရပါတယ်. နောက်တစ်ခု က ကိုယ် တက်တုန်းက မသိခဲ့ရင် နောက်မည်သည့် သင်တန်းမှာ မဆို ဘယ်အချိန် ဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်ပြန်တက်ပြီး သင်ယူလို့ရပါတယ်...အမြဲupdate ဖြစ်တယ့် knowledge ကိုလည်းမျှဝေတယ်.. သင်တန်းဆရာ ကလည်းလူငယ်ဖြစ်တယ့် အတွက် သိပ်ပြီး တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ကြီး သင်ယူရတာမဟုတ်ပဲ ညီအစ်ကို လိုပေါင်းတယ့် အတွက် နားမလည်တာရှိလည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း အားနာစရာ မလိုပဲ မေးလို့ရပါတယ်.. တချို့ နားမလည်တယ့် terms တွေကို အရှင်းဆုံးဖြစ်အောင် ရှင်းပြပါတယ်..သင်တန်းချိန် တက်ရင်းနဲ့ အဆင်မပြေရင်လည်း ကြိုးစားပြီးညှိပေးပါတယ်.. ဒီလိုသင်တန်းမျိုးကို ဒီလို သင်တန်းကြေးနဲ့ တက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီဇိုင်းကာလာ ဘာညာအနေအထား အထာကို တချက်ရှိုးကြည့်ပေါ့ဗျာ .. အယ့်လယ်
Thang No Thawmte
I want to writeashort descriptions about frequency studio
1. Sir Leo teaches very impotant things about recording technique more than he advertise.
2. I improvedalot of recording technique after finished learning.
3. Comparing to before, I improvedalot and I know what are the use of compressor,Eq,reverb, Delay and programing etc.
4.Those who interested in recording and mixing, I encourage you to go to frequency studio to observe and learn about recording,mixing and mastering.
5. I can say Sya Leo Micro isagood teacher because he is very kind to the students and he taught until the students understanding the lesson.So that I like him and satisfy his teaching.
ါသနာတူ အပေါင်းတို့များခင်ဗျာ... ကျနော့်လိုဘဲ Audio Engineering ပညာရပ်များကို စိတ်ဝင်စားမိတယ်ဆိုရင် Frequency Studio မှာဘဲ တက်စေချင်ပါတယ်။ သဘောလည်း အရမ်းကောင်းတယ် စနစ်တကျ သေချာလေး သင်ကြားပေးတယ်။ စိတ်လည်း ရှည်ပြီး စေတနာအပြည့်နှင့် ကျနော်တို့ကို သင်ပေးခဲ့တယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် Single Class ကိုဘဲ ကျနော့် အနေနဲ့ ပိုတက်စေချင်ပါတယ် Instrument တွေနှင့်လည်း အထိအတွေ့ပိုရသလို ကိုယ့်အတွက် တတ်တာလဲ ပိုလွယ်ပါတယ်။ ကဲ... ကိုယ့်ဝါသနာကို တကယ်ပုံဖော်ဖန်တီး ချင်တယ်ဆိုင်ရင် Frequency Studio မှာအမြဲနွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုနေပါတယ်။
Eh Yar Naw